“Cristiano Ronaldo wuxuu ciyaari doonaa ilaa uu ka gaaro 40 sano” – Ryan Giggs – Gool FM
“Cristiano Ronaldo wuxuu ciyaari doonaa ilaa uu ka gaaro 40 sano” – Ryan Giggs
(Yurub) 10 Sebt 2020. Halyeeygii hore kooxda Manchester United haatana ah tababaraha xulka qaranka Weles ee Ryan Giggs ayaa sheegay in weeraryahanka Juventus ee Cristiano Ronaldo uu ciyaari doono ilaa 40 jir.
Cristiano Ronaldo ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay isku muujiyay kooxdiisa ​​Juventus, wuxuuna dhaliyay 31 gool oo ah horyaalka Talyaaniga ah.
Dhinaca kale Ronaldo ayaa kaliya 8 gool u jira rikoorka gooldhalinta Ali Daei ee heer caalami ah, sidoo kale wuxuu u baahan yahay 9 gool si uu dhaafo, isla markaana uu u noqdo gooldhaliyaha ugu sareeya xulalka taariikhda oo dhan.
Ryan Giggs ayaa wareysi uu ku bixiyay wakaalada wararka ee Britain wuxuu ku sheegay:
“Waa inuu qeyb ka yahay kooxda saxda ah, waxaan qeyb ka ahaa koox weyn waxaan ciyaaray ilaa afartan jirkeyga, waxaan arkaa inuu ku sii dhex jiri doono garoomada, sidoo kale uu ciyaari doono ilaa iyo afartan jirkiisa”.
“Wuxuu daryeelaa naftiisa, si sax ah ayuu wax u cunaa, si sax ah ayuu nasiino u qaataa, wuxuu u noolyahay si uu u ciyaaro, waana hubaal inuu yahay xirfadlaha ugu fiican ee aan waligay la ciyaaray”.
“Waxaan arkay tan iyo bilaawga waayihiisii ciyaareed, mana filan kartid waligiis inuu dhalin doono goolal intaas la eg”.
Waxa uu ahaa hibo aad u fiican, iyo ciyaaryahan aad u qurux badan oo kaa farxiya, wuxuu ahaa sida aniga oo kale, markasta wuxuu raadin jiray faa’iido dheeri ah oo ka dhigeysa inuu ka sare maro qof walba”.
“Wuxuu had iyo jeer ku jiray qolka jimicsiga, wuxuuna kaliya maskaxda ku hayay sida uu u fiicnaan karo, intaas kaddib wuxuu United u dhaliyay 40 gool hal xilli ciyaareed, tan iyo markaas wixii uu sameeyayna waxay ahaayeen kuwo la yaab leh”.
Virgil van Dijk oo farriin u diray Kubbad-sameeyaha kooxda Man City ee Kevin De Bruyne
RASMI: Kooxda Chelsea oo xaqiijisay lambarrada ay xiran doonaan xiddigaheeda xilli ciyaareedkan 2020/21 & Christian Pulisic oo lagu taagay lambarka 10-aad